Ọwa Telegram 6 kacha mma ekewara site na isiokwu | Nzukọ mkpanaka
Ị ka na -anọghị na ihe ndị a niile Telegram ọwa Kedu ihe anyị ga -etinye gị ọzọ? mgbe ahụ ị na -efu ọtụtụ ọdịnaya na isiokwu, ọbụlagodi onyinye na nkwalite, na naanị n'ime otu Telegram ndị a ka ị ga -ahụ ngwa ngwa. Ngwa ngwa ị gaghị atụ uche otu, kwere nkwa. Ma nke a abụghị naanị maka onyinye, ị ga -ahụkwa ahịrịokwu ndị mara mma, otu teknụzụ, otu ọchị, n'ime otu ndị ọzọ ị nwere ike ịhụ akwụkwọ ahụaja wee gụọ akụkọ ụbọchị site na ihe mbụ n'ụtụtụ.
N'isiokwu a, dịka anyị gwara gị, anyị ga -eme ya ka anyị kwuo ya nchịkọta nke ọwa kacha mma ị nwere ike ịchọta na ngwa ozi ngwa ngwa a na karịa ihe niile, nke ị nwere ike sonye na ya n'efu. Geekwa anyị ntị, na Telegram enwere puku na puku puku ọwa na otu, yabụ, ọ ka mma ị attentiona ntị na elu ma ọ bụ ndepụta dị ka nke a n'ihi na ọ bụrụ na ịmalite nyocha ozugbo site na ngwa n'onwe ya, ị ga -agba ara. Tupu anyị ekwuo maka nke a, anyị ga -eme obere ngalaba nke anyị ga -agwa gị ihe dị iche n'etiti otu na ọwa.
1 Kedu ihe ọwa Telegram na gịnị bụ otu Telegram? Ọdịiche dị n'etiti ha
2 Telegram ọwa
2.1 Mụta asụsụ na ọwa ndị a
2.2 Mụta isi nri na ọwa ndị a
2.3 Ọwa akụkọ
2.4 Ọwa egwuregwu vidiyo na ngwa dị iche iche
2.5 Ọwa ga -achọta onyinye na azụmahịa na Telegram
2.6 Ọwa maka ndị na -agụ ya
Kedu ihe ọwa Telegram na gịnị bụ otu Telegram? Ọdịiche dị n'etiti ha
Iji mara echiche a, na Telegram ị ga-ahụ otu ụdị WhatsApp kamakwa ọwa ọha ma ọ bụ nkeonwe. Iji nweta isi ihe dị iche na ọwa telegram na otu bụ nke ahụ na ọwa ị gaghị enwe ike ikwu okwu, naanị onye mepụtara ya ma ọ bụ nye ndị ọzọ ikike nwere ike ikwu okwu, ọ bụ ya mere ejiri ha enye ozi, nyefe onyinye na ụdị ihe ndị ọzọ. Ozugbo ị nọ na ọwa a, ihe ga -eme bụ na ị ga -enweta ozi naanị ma ị ga -enwe ike ibudata faịlụ ndị nchịkwa biputere na ọwa.
N'ikpeazụ, ekwesịrị ikwu na na ọwa ndị a anyị agaghị ahụ oke nke ndị mmadụ nwere ike banye na ọwa. Ngwanụ ihe otu dị ka nke a dị iche kpamkpam gaa n'ihe anyị kọwarala gị, ebe ị ga -enwe ike ikwu okwu, zipu foto, ma ọ bụ ihe ọ bụla masịrị gị.
Ebe nrụọrụ weebụ na-akparịta ụka mmekọrịta kachasị mma iji gwa ndị ọzọ okwu
Iji nye gị ụfọdụ ozi gbasara isiokwu a, ekwesịrị ikwu na a ga -enwe ọwa ọha mana a ga -enwekwa ọwa nkeonwe. Ndị nkeonwe bụ ọwa nkeonwe, ịkpọ ha n'ụzọ ụfọdụ, ị gaghị enwe ike ịbanye ma ọ bụrụ na ha akpọghị gị, mgbe ị nwere ike isonye na ọha na -enweghị nsogbu ọ bụla. Iji nwee ike isonye na ọwa ọha, ị nwere ike ime ya site na njikọ, ọkpụkpọ oku ma ọ bụ site n'ịchọ n'otu ngwa Telegram.
Ozugbo anyị matara ihe a niile, anyị ga -aga n'ihu mee ndepụta nke ọwa Telegram kacha mma anyị hụgoro na nwalere. Ka anyị gaa ebe ahụ!
Iji nweta ọwa ndị a, anyị na -ahapụrụ gị aha ha, naanị ị ga -achọ ha site na ngwa n'onwe ya site na itinye aha nke ị ga -ahụ n'isiokwu a.
Mụta asụsụ na ọwa ndị a
Ị na -amụ asụsụ? mgbe ahụ ndị otu a anyị ga -ahapụrụ gị ọzọ ga -enyere gị aka n'ịmụ asụsụ. N'ime ndị otu a, ị ga -enwe ike mụta ntụgharị asụsụ dị iche iche, ịkpọpụta okwu, akpaala okwu, okwu na ụdị ihe ndị ọzọ na -abata n'uche na -enweghị nsogbu. Aha otu abụọ a bụ 'Asụsụ Bekee Ala' na nke abụọ 'English EveryDay'.
Mụta isi nri na ọwa ndị a
Ọ bụrụ na ị na -amụ asụsụ tupu oge ahụ mana n'otu oge ị ga -aghọ kichin zuru oke, ndị a bụ ọwa telegram gị n'enweghị obi abụọ ọ bụla. N'ime ọwa nri ndị a, ị ga -ahụ efere zuru oke, usoro nri na, karịa, mkpali n'ozuzu iji mụta ka esi esi nri dị ka onye siri nri siri ike. Kwadebe nri abalị n'ụbọchị ihunanya gị ma ọ bụ nzukọ gị na ndị enyi gị na otu nri a. Ga -ahụ ọtụtụ, mana nke kachasị nke anyị hụrụ nke ọma bụ 'Ịhụ nri n'anya'.
Dị ka aha ya na -ekwu, ebe a ị ga -achọpụta ihe niile na -eme kwa ụbọchị. Maka na ọ bụrụ na ị mechighị ọnụ otu a, ị ga -enweta ozi ka akụkọ n'onwe ya na -apụta, ya bụ, ị ga -enwe ozi n'isiokwu dị iche iche nkeji kwa nkeji. Ị gaghị echefu ihe ọ bụla na -eme n'ụwa site na ọwa ozi Telegram ndị a. Ọwa ndị a na -ajụ ajụjụ ị nwere ike isonyere bụ ndị a: eldiario.es, runrun.es, The New York Times, Magazin & akwụkwọ akụkọ na PDF, zuru, n'efu, La Patilla, RT Noticias, Coronavirusinfo na ọtụtụ ndị ọzọ ị ga -ahụ site na nyocha n'ime ngwa nchọta nke ngwa.
Ọwa egwuregwu vidiyo na ngwa dị iche iche
Ibe akwukwo kacha mma ka ibudata egwuregwu maka PC
Ị bụ ezigbo onye egwuregwu? mgbe ahụ ị gaghị echefu onyinye ma ọ bụ ozi sitere na mpaghara egwuregwu vidiyo na ọwa Telegram ndị a. Ihe ị ga -enweta bụ na ị ga -achọpụta banyere mwepụta niile nke egwuregwu vidiyo kacha mma na ị ga -ahụkwa ọwa ibudata ọtụtụ APK iji kpọọ na ekwentị mkpanaaka gị. Ọwa ndị a na -ekwu maka ya bụ ndị a: Eserese Retro, Egwuregwu, Community APK FULL PRO Reborn, Switch Mania, Playmobil, LegOffers, OffersPlaystation Games, OffersXbox Games, Offers Nintendo egwuregwu.
Ọwa ga -achọta onyinye na azụmahịa na Telegram
Ị na -ere ahịa n'ịntanetị oge niile? Mgbe ahụ ị ga -amata na ị nwere ike banye ahịa ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na -eche oge kwesịrị ekwesị wee chọọ onyinye ahụ. Ọ dị mma, site na ọwa ndị a na -enye na azụmahịa ị gaghị efu otu, anyị na -ekwe nkwa ya. Ị ga -ahụ onyinye na ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ teknụzụ ozugboỌ dịịrị gị ikpebi irite uru na onyinye a ma ọ bụ chọta nke ka mma. N'ikpeazụ, ọwa ndị a ga -agwa gị na nke a bụ onyinye kacha mma ugbu a na ịntanetị.
Ọwa onyinye ị ga -ahụ na Telegram bụ ndị a: Aliexpress, Ụbọchị Xiaomi, Mpaghara Azụmaahịa, Azụmahịa Andro4all.
Ọwa maka ndị na -agụ ya
N'ikpeazụ, anyị agaghị ahapụ ndị na -agụ akwụkwọ echefuru echefu. Ee, enwere ọwa na Telegram maka gị. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịgụ ihe, ị ga -ahụ ọtụtụ ọwa ị ga -agụ utu aha dị iche iche. Ị nwere ike budata ha dị ka iwu n'ozuzu site na ngwa Telegram n'onwe ya ma ọ bụ ọ ga -atụgharị gị gaa ebe ị ga -ahụ ya dị n'ụdị ya dị iche iche. Ha ga -enyefekwa gị ọkwá ka i wee nwee ike irite uru na ịzụta.
Ebe ibudata magazin efu na PDF
Ọwa ọgụgụ anyị na -ekwu maka ya bụ ndị a: EBooks efu, 8Freebooks.net, Psychology niile, Eziokwu Akwụkwọ Nsọ.
Kedu ihe ị chere? Anyị achọtala isiokwu gị? Ọ bụrụ na ịchọtabeghị ya, gwa anyị n'igbe nkọwa ka anyị nwee ike banye n'ime miri wee chọọ ọwa Telegram nke dabara na mmasị gị. Hụ gị n'isiokwu na -esonụ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » telegram » Ọwa Telegram 6 kachasị mma nke isiokwu kewara
Budata akwụkwọ ahụaja Windows: ibe iri kacha mma
Etu esi ebudata Fortnite na gam akporo ma ọ bụrụ na akwadoghị ya